10 Kasị Beautiful Medieval obodo na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Kasị Beautiful Medieval obodo na Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 03/07/2020)
Europe jupụtara ọgaranya akụkọ ihe mere di iche-iche. N'ezie, N'agbanyeghị ebe ị na-aga, ị ga-eleghị anya ịhụ foduru nke gara aga mepee. Mgbe ụfọdụ, ndị a ebe ndị mmadu ebighi mkpọmkpọ ebe. N'akụkụ aka nke ọzọ, ndị a ebe nwere ike ịbụ ebe a na-anwụghị ule nke oge na ike n'ime ụwa nke oge a. Save A Train na-ewe gị na a njem nke 10 kasị mara mma ochie obodo na Europe. Kwadebe-ahụ mara mma obodo na ngwakọta akụkọ ihe mere eme na oge a ndụ na ihe ndị ahụ na ụbọchị azụ ochie oge.
1. Kasị Beautiful Medieval Town Na Europe – Delft, Mba netherland
Ọ bụrụ na ị na-achọ a obodo na-agụnye ihe a ochie obi na-adị na ụwa nke oge a, anya ọ gara n'ihu karịa Delft. Delft u nwere ike id a mgbịrịgba na onye ọ bụla na-arụ art ebe ọ na-na-akpachi anya na Dutch ese Vermeer. N'ezie, ma ọ bụrụ na ị gaa obodo, ị ga na-eche dị ka ọ bụrụ na ị na-na sere onwe ya. Ị nwere ike ka na-eche ọdịdị zuru oke nke sere mgbe na-eje ije site na obodo. Mgbe ọ na-abịa ochie ụlọ, e nwere a Renaissance style ụlọ ezumezu obodo ma a ochie ụka na otu nnukwu leaning elu. E wezụga ịrịba ochie ije ga itu n'anya ị, Delft nwekwara ọtụtụ ọwa mmiri na-aga site n'obodo na-eme ka ambiance pụrụ iche.
Hallstatt nwere ike ịdị maara ndị mmadụ na-eso ọmarịcha njem nleta ebe na Instagram. E nwere ọtụtụ pụtara photos si n'ógbè, na mgbe ị gara obodo, unu ga-amarakwa ihe mere. Inweta a ọjọọ picture ga-achọ mgbalị dị ukwuu n'ihi na egwu waterfront obodo nwere, nke bụ ihe ịtụnanya n'anya. Ọzọkwa, dum anya na obi na-adị nke obodo ga-ahapụ gị egwu. The dum nwere a Baroque obi na-adị ya, na ọ bụ ya mere nnukwu na a na e weere a UNESCO ụwa nketa saịtị. Enweta ochie obi na-adị nke Hallstatt na gị ọzọ njem na Austria.
3. Kasị Beautiful Medieval Town Na Europe – Echternach, Luxembourg
n'ezieernach bụ ndị kasị ochie obodo Luxemburg, na na ọ na-emi odude gburugburu mgbidi Echternach Abbey. Ọ bụ ebe obibi a otutu ochie na nnukwu akụkọ ihe mere eme ebe, dị ka Church of Saint Pita na Pọl, na nnukwu ụlọ ụka Senti nke Saint Willibrord, a Gothic imezi n'ọma ahịa, na a Roman Amọraịt + na ụbọchị laghachi n'oge ndị Rom na-achị. Na-eje ije site na n'okporo ámá nke Echternach ga-eche dị ka ị na-ochie ụfọdụ. Otú ọ dị, ọ ga-enwe niile ntụsara ụwa nke oge a na-adịghị nọ n'ọchịchịrị.
Carcassonne bụ a ochie obodo na-walled anya n'ebe ndị ọzọ nke ụwa. Mgbidi ahụ na elu ụbọchị azụ ka narị afọ nke 13 na-enye obodo ahụ anya ma na-eche nke a ochie obodo. Naa, Carcassonne bụ a UNESCO World Heritage Site na-enye gị mmetụta ị gara azụ na oge. Nke a enchanting na kpokọtara ikuku na-adọrọ na-apụghị ịgụta ọnụ njem nleta na chọrọ na-enweta ochie ụwa ikuku.
Narbonne ka Carcassonne
Toulouse ka Carcassonne
Montpellier ka Carcassonne
Nîmes ka Carcassonne
5. Kasị Beautiful Medieval Town Na Europe – Heidelberg, Germany
Heidelberg na emi odude ke a nnọọ inhabitable ebe. N'ezie, n'ógbè kemgbe n'ụlọ ndị mmadụ n'ihi na afọ. The mbọhọ ka osimiri Neckar na a mma ihu igwe mere ka ebe a mma home. Kemgbe ọtụtụ afọ, Heidelberg kemgbe a center maka ndị mmadụ. N'ezie, nke a bụ anya na ambiance na ije nke obodo. Na-enwekwa Baroque obodo center na ihe ịrịba nnukwu ụlọ bụ nanị abụọ ihe na-egosi gị na richness na ịdị ukwuu na ebe a ka turu ọnụ ofụri oge. Hieldberg bụghị a lekwasịrị n'oge agha ụwa nke abụọ, nke pụtara na ọ ka na-na-eburu a ọtụtụ akụkọ ihe mere eme. Were a mkpagharị site a dị ịtụnanya na ọnọdụ na-ahụ ihe niile o nwere na-enye.
Mgbe ọ na-abịa ochie obodo na Central Europe, Bern na Switzerland bụ a ga-eleta. The ọmarịcha, ochie obodo bụ otu n'ime ihe ndị kasị mma obodo na Europe. Ọ bụ ihe jupụtara arcades na ụbọchị azụ n'etiti afọ na isi-iyi na-egosi ndị dị iche iche na nkà na ọnụ ọgụgụ. N'ezie, mgbe ọ na-abịa na nkà, Bern nwere otu nke kasị ukwuu ịnakọta nke art si artist Paul Klee. E wezụga ụkpụrụ ụlọ mma na mere ihe akụkọ ụlọ na obodo, e nwekwara a mara mma osimiri na-aga site na ya. The osimiri Aare-aga site n'obodo ukwu na-eme ka ọ nnọọ ọmarịcha. Mark Bern dị ka a ebe inyocha na gị ọzọ njem Switzerland.
Zurich Iji Bern Ụgbọ oloko
Geneva Iji Bern Ụgbọ oloko
Interlaken Iji Bern Ụgbọ oloko
7. Kasị Beautiful Medieval Town Na Europe – San Gimignano, Italy
San Gimignano bụ akwụkwọ ọgụgụ ugwu obodo site Tuscany. Ọ na-adọta ọtụtụ puku ndị ọbịa na ya ochie Italian anya. The isi mma na San Gimignano bụ skyline nke breathtaking elu na ụbọchị azụ ka narị afọ nke 14. Mgbe ebe dara n'okpuru ọchịchị nke Florence, niile ma iri na anọ nke iri asaa elu abụọ e bibiri. Taa obodo bụ a UNESCO Heritage saịtị, na ọ bụ a ga-ahụ onye ọ bụla nke nwere mmasị na Italy ọgaranya na-adọrọ mmasị mere.
8. eji, Belgium
Ọtụtụ na-ezo aka eji dị ka ndị Venice nke North. Ọ bụ ihe jupụtara ọwa mmiri, cobbled ụzọ, na ọmarịcha n'ámá na-gburugburu na-arị elu elu na chọọchị dị iche iche. Ndị a bụ nanị ụfọdụ nke na-adọrọ mmasị na-eme ka ọtụtụ puku ndị njem a na-adọrọ mmasị obodo. Na-eje ije site na Bruges ga-ahapụ gị egwu na ngwakọta nke ọdịdị na ụkpụrụ ụlọ ebube. E nwere ọtụtụ ihe nke ochie ụlọ n'obodo, ị pụrụ ijide n'aka na a nleta obodo a ga-ahapụ gị anya na ihe ndị mara mma na udo nke ebe ọchị.
9. Kasị Beautiful Medieval Town Na Europe – Lillafured, Hungary
Lillafured bụ zuru okè anọ na nke ọdịdị na ochie ije. Odude esote Lake Hamori na Hungary, ọ bụ a ga-eleta ebe. Ọ na mbụ wuru dị ka a ga-eme site na agụ András Bethlen. Otú ọ dị, oge n'aga, ọ ghọrọ a obodo na a ọmarịcha hotel. Lelọ dị ịtụnanya gbara ya mmiri, eke ọgba, hiking ụzọ ụkwụ, na ọbụna nghọta gardens. Ka i si hụ, Lilafured bụ zuru okè ebe maka ọdịdị hụrụ.
Mgbe na-aga site anwụ na-acha na ọmarịcha Tuscan inyefe ugwu nta, i nwere ike abịakwasị a ochie obodo dị na ugwu – Montepulciano. Ọ nwere ihe nile i nwere ike chọrọ site na Italian obodo. The isi na-adọrọ mmasị na-agụnye ihe dị ka ịtụnanya wine, oge ochie nnukwu ụlọ mgbidi, na-atọ ụtọ nri, na ọbụna thermal iyi. Ọ bụ n'ezie a maa mma n'ebe ị ga-echeta ruo mgbe ebighị ebi. Jide n'aka na ịkwụsị site ma ọ bụrụ na ị na-ebi na-eme njem site Italy.
Siena ka Montepulciano Ụgbọ oloko
Grosseto ka Montepulciano Ụgbọ oloko
Florence na Montepulciano Ụgbọ oloko
Rome ka Montepulciano Ụgbọ oloko
Mgbe ọ na-abịa ochie obodo na obodo nta, Europe jupụtara ha. Iwepụta oge ka ịga ndị a coves nke ọdịbendị na akụkọ ihe mere eme ga-eme ka gị na echiche na ihe ndị mmadụ nwere ike. Book A Train on time and visit the countries that most draw your interest.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “10 Kasị Beautiful Medieval obodo na Europe” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/beautiful-medieval-towns-europe/ – (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#beautifultowns #traveleurope ochie medievaltown ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel
Business Travel site Train, Inzọ Njem Italytali, Ingbọ ologo Spain, Zụọnụ Ndụmọdụ, Train Travel Turkey, Travel Europe